बाथरोग नसासम्बन्धी समस्या हो । जोर्नीमा बाथरोगले बढी दःख दिन्छ । बाथरोगको उपचार हुन्छ । तर, जाँचपछि औषधि सेवन गर्ने क्रममा बिरामी धेरै नै सचेत हुनुपर्छ । बाथरोग विशेषज्ञको सुझावलाई हुबहु पालना नगरेको अवस्थामा रोगीको अवस्था जटिल बन्न सक्छ । तपाईँ पनि बाथरोगको औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने डा.विनय रेग्मीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बताएका छन् ः
Last modified on 2018-12-23 14:40:24
दिल खोलेर हाँस्नुस् , खुसीको साँचो तपाईंसँगै छ...
भनिन्छ जो हाँस्छ अनि नाच्छ उ धेरै बाँच्छ । जीवनमा दुःख पीडा सबैसँग हुन्छ, त्यो पीडा...
गर्मी महिनामा सोडाजन्य पेय पदार्थ खानुपूर्व यो अवश्य पढ्नुहोस्
के तपाईँ पनि गर्मी समयमा सर्बत पीउने गर्नुहुन्छ ? यदि तपाई अत्याधिक गुलियो भएको...
बजारमा पाइने यि सामानको प्रयोगले उत्पन्न हुन सक्छ झनै ठूलो समस्या
दिनप्रतिदिन गर्मी बढ्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि पनि धुँवा धुलोले झनै पीडित छौँ । बढ्दो...
फोक्सोमा जाली पर्ने भन्ने थाहा छ ? बेलैमा उपचार नभए मृत्युसम्म हुनसक्छ (भिडियो सहित)
फोक्सोमा लाग्ने रोग अन्य रोगको तुलानामा केही जटिल मानिन्छ । फोक्सोमा लाग्ने रोगमध्ये...